AVI bụ nnọọ ihe kasị mkpa na ọkaibe format iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma echiche nakwa dị ka audio mgbe faịlụ na-egwuri na ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere format a na-ewere n'ụwa nile mgbe ịchekwa na-ekere òkè media dị ka ọ bụ ìhè na size. Na-adịrị mgbasa ozi ọkpụkpọ na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị dị mkpa iji na-e iji jide n'aka na faịlụ na-egwuri na a nkuzi bụ ihe niile banyere AVI Ọkpụkpọ na otú ọ pụrụ isi na-egwuri iji windows media ọkpụkpọ.
Part 1: Gịnị windows media ọkpụkpọ nwere ike agaghị akpọ AVI?
Nkebi nke 2: tọghata AVI videos usingWondershare Video Converter Ultimate
Nkebi nke 3: Wụnye-atọ ndị ọzọ AVI codecs
Nkebi nke 4: Comparison Isiokwu
Ọ bụ-ahụ kwuru na e nwere ọtụtụ ihe nke na-n'aka na AVI format na-adịghị na-egwuri mgbe Windows Media Player na-eji na a nkuzi ga-ahụ na ihe ndị kasị nkịtị mere na-abụghị nanị depụtara ma ha na-egbo site na iji ala nke nkà functionalities mere na ọ bụrụ na e nwere oge ọzọ mgbe ahụ ọrụ adịghị nwere ịchọ Nkuzi online. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere n'elu ihe atọ mere maka mgbasa ozi ọkpụkpọ na-egwu na mgbasa ozi faịlụ e depụtara dị ka ndị a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ihe ọmụma na nwere ike ngwa ngwa na-ekpe ikpe na nke na-eme ka n'aka na na mkpebi na-etinyere na nke kacha mma n'ụzọ.
1. Codec bụghị arụnyere
Mgbe onye ọrụ ahụ adịghị ebudatara na arụnyere na mkpa codec na-egwu AVI faịlụ ahụ nke etịbe kasị na ọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ bụ annoyed. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe codec mkpọ arụnyere n'ihi na nke onye ọrụ bụ n'aka na arụmọrụ ga-mgbe-ezute mbipụta na mkpa mmemme na-arụnyere na nke a na-agaghị na-egbochi si arụ ọrụ. Iji nweta ihe kasị nke echiche ọ na-gwara ịchọ online codec ngwugwu na Ya mere onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ a na-eme na nke a.
2. emerụ faịlụ
Ọ bụrụ na ndị mkpa codec na nkwụnye ins na awụnyebeghị mgbe ahụ nke abụọ kasị eji maka mgbasa ozi ọkpụkpọ na-adịghị-egwu AVI faịlụ bụ eziokwu na onye ọrụ na-agbalị iji a faịlụ na na-emerụ. Usoro ihe omume ga-bụghị naanị ezute njehie ma ọ ga--egosipụta nke mere na onye ọrụ na-ọma asian banyere nsogbu a na-ihu. Na nke a mmekọrita onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na online Nkuzi na-abụghị nanị na-agụ ma na-etinyere iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe mkpebi na-etinyere na nke a. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ngwọta a ga-etinyere na nke a.
3. Format abụghị converted n'ụzọ kwesịrị ekwesị
Site na iji substandard akakabarede ụzọ na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ ga-bụghị naanị na-eche ihu nke ma ga-enweta njehie na AVI faịlụ bụghị playable. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe akakabarede usoro na-etinyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nkuzi na-agụ na zuru iji jide n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Nkebi nke 2: tọghata AVI vidiyo site na iji Wondershare Video Converter Ultimate
Ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe usoro na ike-etinyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na ọ bụ na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na 150+ format nkwado na-enwe na kasị mma n'ụzọ na-enye nke nke. Na-esonụ bụ nzọụkwụ ndị a ga-etinyere na nke a iji jide n'aka na needful na-eme na klas:
1.The URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html bụ ka a bịa na iji jide n'aka na ihe omume si ọhụrụ version ebudatara, arụnyere na-agba ọsọ:
2.Once na e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na faịlụ na-atụkwasịkwara isi interface iji nweta aga:
3.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ka họrọ ihe kwesịrị ekwesị format si nri n'igbe nke usoro ihe omume na-eme ka n'aka na Windows Media Player akwado usoro na-ahọrọ:
4.The akakabarede button a na-ahụ na-pịrị iji jide n'aka na needful a mere na usoro okokụre ebe a:
5.The ọrụ na onye ga ugbu a-enwe ike ime n'aka na AVI format na-egwuri seamlessly:
Ọ bụkwa ndị kasị mma na ndị ọkaibe omume iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. Ọ na-na--ahụ kwuru na usoro a ga-soro na nke a e kwuru ka ndị a:
1.The onye ọrụ kwesịrị ileta URL http://filehippo.com/download_klite_codec_pack/ iji jide n'aka na ọ hazie amalite:
2.The download njikọ bụ mgbe ahụ na-pịrị na-amalite nbudata nke usoro ihe omume na metụtara faịlụ bụ ga-azọpụta:
3.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ebudatara faịlụ na-agba ọsọ na kpaliri na-soro na nke a iji wụnye usoro ihe omume. Ozugbo mere a usoro Malitegharịa ekwentị a chọrọ:
Mmemme na metrics
Wondershare Video Convertor Ultimate Dị mfe All
K-Lite Codec Pack Adịghị mfe Specific
The Wondershare Video Convertor Ultimate bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume na-eme ka n'aka na needful a mere na metrics na-kọwara dị ka n'okpuru:
Wondershare Video Convertor Ultimate bụ ihe kasị mma na omume nke nwere ọrụ enyi na enyi interface na ọ na-eme n'aka na needful na-eme na dị nnọọ ole na ole clicks na onye ọrụ mgbe nwere ga-esi n'ime mgbagwoju Filiks na-eme ka n'aka na needful na-eme.
Wondershare Video Convertor Ultimate akwado n'elu 150 formats nke na-egosi na professionalism na e ike mgbe usoro ihe omume a na-mepụtara. Ọ bụ ihe kasị mma omume iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe pụta mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ n'ụzọ.
> Resource> WMP> 2 ụzọ na-egwu AVI na Windows Media Player